GBS that expectant mothers should be aware of - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
GBS that expectant mothers should be aware of
Group B Strep Awareness Month ကိုတော့ လူတိုင်းသတိပြုမိစေဖို့အတွက်ဇူလိုင်လမှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။Group B Streptococcus (GBS) ဆိုတာကတော့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၅ ဦးအနက် ၂ ဦး မှာ ဒီပိုးရှိနေတတ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ သဘာဝတိုင်းသွားလာနေပြီး အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာမပေးပေမယ့် ကလေးငယ်များမှာတော့ပိုးကူးစက်မှုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးမှတဆင့် မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်ကို ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။GBS ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ များသောအားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း၊လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်း၊ လည်ချောင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကူးစက်ပုံတွေအနေနဲ့တော့ တခြားပိုးတွေလိုပဲ အရေပြားခြင်းထိတွေ့ရာကကူးစက်တတ်ပါတယ်။သွေးမှတဆင့်ကူးစက်မှု၊အရိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ထားရာ နေရာတွေမှာ ကူးစက်မှု၊ဦးနှောက်နဲ့ကျောရိုးဖုံးထားတဲ့တစ်ရှူးမှာကူးစက်မှု၊အဆုတ်ဝန်းကျင်မှာကူးစက်မှု၊
မွေးကင်းးကလေးတွေမှာကူးစက်ခံရတဲ့အခါဖျားခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ နို့မစို့ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနဲ့အရေပြားမှာအပြာရောင်အင်ပြင်လိုဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးစီးဆင်းရာနေရာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းတွေမှာကူးစက်ရင်တော့ ဖျားခြင်း၊ချမ်းခြင်းနဲ့ နုန်းချိခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဆုတ်နေရာမှာကူးစက်ရင်တော့ အအေးမိတုပ်ကွေးလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနဲ့ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းလိုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အရေပြားနဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့တစ်ရှူးတွေမှာကူးစက်ရင်တော့ အရေပြားနီမြန်းခြင်း၊ကိုက်ခဲနာကြဉ်ခြင်း၊ အရေပြားနွေးနေခြင်းလိုမျိုးတွေခံစားရပါတယ်။အရိုးအဆစ်တွေမှာ ကူးစက်ရင်တော့ ဖျားခြင်း၊ချမ်းတုံခြင်း၊အရိုးအဆစ်တွေယောင်ယမ်းတောင့်တင်းခြင်းတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုများနဲ့ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းလိုမျိုးပြသနာ တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းCDC မှခန့်မှန်းချက်အရ GBS ရောဂါဖြစ်ပွားသောကလေးငယ်များ၏ ၄ မှ ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာသေဆုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
GBS ဘက်တီးရီးယားပိုးကို မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဆီရောက်ခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်း တွေအနေနဲ့ တော့ကလေးမွေးဖွားမယ့်မိခင်ကိုပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ရှိနေပါကလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးသောက်သုံးစေခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
When I metapatient who was bleeding
ကလေးဘဝမှာ ကစားသင့်သလောက်ကစားတာ လှုပ်ရှားတာဟာ ကလေးအတွက် ကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဒာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုထောက်ပံ့ပေးသလို ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ကလေးနဲ့ မဆိုင်သေးတဲ့ စမတ်ဖုနး်တွေကို သုံးစွဲမှုများတာက ကလေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း နညး်ပါးသွားစေသလို စိတ်အလိုမကျမှု တွေသာများလာစေပါတယ်။ ကလေးကို ငြိမ်အောင် အမြဲသုံးခိုင်းထားပြီး ပြန်ပြီးလျော့ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ…
When should you start brushing your baby's teeth? How to take care of children's dental health?
၁။သွားပေါက်စလေးတွေသိဖို့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့သွားလေးတွေဟာ၆လမှ၁၂လအရွယ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ သုံးလအရွယ်လောက်မှာ သွားရည်တွေကျလာတတ်ပြီးလက်တွေကို ပါးစပ်ထဲထည့်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်အရွယ်မှာသွားတိုက်သင့်လဲလို့မိဘတွေကမေးလေ့ရှိပါတယ်။ အသက်၆လကျော်လာမှသွားတိုက်ခြင်းကို စတင်သင့်ပါတယ်။ သွားစပေါက်ကာစမှာ သွားပွတ်တံသုံးဖို့မလိုသေးဘဲ ဝါဂွမ်းတံလေးတွေသုံးပြီး ရေစွပ်ကာသန့်စင်ပေးရပါမယ်။ သွားစပေါက်ချိန်မှာ အရှေ့ဘက်ကအောက်သွားလေးတွေစ ပေါက်တတ် ပါတယ်။သွားလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဖလိုရိုက်အနည်းငယ်သာပါတဲ့ ကလေးသွားတိုက်ဆေးကို တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးကို ကလေးက ပြန်မထွေးတတ်သေးတာကြောင့် ဆန်စေ့ပမာဏ…